Famaritana: Aer- na Aero-
Ny prefix (aer- na aero-) dia manondro ny rivotra, oksizenina, na entona. Avy amin'ny teny grika midika hoe rivotra na miankina amin'ny rivotra iainana.
Aerate (aer- eat ) - hampirona amin'ny fiaramanidina na ny entona. Mety hidika koa ny famatsiana ra amin'ny oksizenina izay mitranga amin'ny fangatahana.
Aerenchyma (aer-en-chyma) - sela manokana ao amin'ny zavamaniry sasany izay mamorona banga na lakandrano izay mamela ny fifamoivoizana eo anelanelan'ny fakany sy ny tifitra.
Ity trondro ity dia matetika hita any amin'ny zavamaniry akondro.
Aeroallergen (aero-aller-gen) - vovoka kely vovoka ( pollen , vovoka, spores , sns.) Izay afaka miditra ao amin'ny trakta momba ny taovam-pisefoana ary miteraka valim-boka na fiterahana .
Aerobe (aer-obe) - vatana mangatsiaka izay mitaky oksizenina ho an'ny atidoha ary tsy misy afa-tsy amin'ny fisian'ny oksizenina ihany.
Aerobic (aer-o-bic) - midika fa misy oksizenina ary matetika dia miantso ireo zavamanana aerôbika. Ny Aerobes dia mitaky oksizenina ho an'ny atidoha ary afaka miaina fotsiny raha misy oksizenina.
Aerobiology (aéro-biolojia) - ny fandalinana ireo vondrona velona sy tsy mety ateraky ny rivotra izay mety hiteraka valim-boka. Ohatra amin'izany ny vovoka, holatra , algoma , pollen , bibikely, bakteria , virosy , ary aretina hafa.
Aerobioscope (aero- bioscope ) - fitaovana iray ampiasaina hanangonana sy handinihana ny rivotra mba hamantarana ny isa bakteria.
Aerocele (aero-cele) - ny fananganana ny rivotra na ny gazy ao anaty lava-patana voajanahary kely.
Ireo fitarafana ireo dia mety hivoatra ho an'ny cysts na ny tabataba ao amin'ny havokavoka .
Aerocoly (aero-coly) - fepetra iray manamarika ny fametrahana gazy ao amin'ny taolana.
Aerococcus (aero-coccus) - karazam-bakteria avy amin'ny rivotra no fantatra voalohany tamin'ny famokarana rivotra. Izy ireo dia ampahany amin'ny flora ara-dalàna amin'ny bakteria izay miaina eo amin'ny hoditra.
Aerodermectasia (aero-derm-ectasia) - fepetra miharihary amin'ny fihariana ny rivotra amin'ny tavy ambany (ambany). Antsoina koa hoe emphysema ambany izany, io toe-javatra io dia mety hivoatra avy amin'ny làlan-kaleha na lozam-pifamoivoizana ao amin'ny havokavoka.
Aerodontalgia (aero-dont-algia) - fanaintainana nify izay mitombo noho ny fiovan'ny rivotra iainan'ny atmosfera. Matetika izy no mifandray amin'ny fisidinana eny amin'ny toerana avo.
Aeroembolism (aero-embol-ism) - fanimbana fanangonan-tsorona vokatry ny rivotra na gazy ao anatin'ny rafi-pandrefesana .
Aerogastralgia (aero-gastr-algia) - fanaintainan'ny vavony vokatry ny rivotra mando ao amin'ny vavony.
Aerogen (aero-gen) - bakteria na mikrôbazy izay mamoaka entona.
Aeroparotitis (aero-parot-itis) - ny fanasitranana na ny fihenan-damba amin'ny fantsom-parotida vokatry ny tsy fisian'ny rivotra. Manasitrana ny salama ary manakaiky ny vava sy ny tenda.
Aeropathy (aero-pathy) - teny ankapobeny miresaka momba ny aretina vokatry ny fiovan'ny toetran'ny atmosfera. Indraindray izy io dia antsoina hoe aretina amin'ny rivotra, aretina avo, na aretina lavareny.
Aerophagia ( aero- phagia ) - ny fihenan'ny rivotra be loatra. Izany dia mety hitarika amin'ny aretim-pivalanana, ny fikolokoloana ary ny fanaintainan'ny tsinay.
Anaerobe (an-aer-obe) - zavamananaina izay tsy mitaky oxygène noho ny fanafody ary mety misy amin'ny tsy fisian'ny oksizenina. Ny anaerobes fitiliana dia afaka miaina sy mivoatra amin'ny oksizenina na tsy misy. Ny anaerôb mandidy dia afaka miaina raha tsy misy ny oksizenina.
Anaerobika (an-aer-o-bic) - midika fa tsy misy oksizenina ary matetika no manondro ny organism anaerobika. Anaerobes, toy ny bakteria sy arakanjely , miaina sy mitombo amin'ny tsy fisian'ny oksizenina.
Firy kintana maro no hitanao amin'ny alina?
Fiompiana aktin'ny baolina lavalava
Miorena amin'ny fizika
Ahoana ny fikajiana fahadisoana amin'ny chimie
Henderson Hasselbalch definition definition
Inona ny fifindrana simika?
Biôlôjia sy suffixes: haplo-
Lisitry ny metaly Platinum Group na PGMs
Fomba fampiasana ny 'Christmas meres' amin'ny teny alemà
Inona no lazain'ny Baiboly momba ny fanandroana?
Inona no atao hoe Chine?
1965 PGA Championship: Marr Staves Off Nicklaus, Casper
Samhain Visit Cemetery
65 ireo mpivarotra am-polony no miara-mipetraka amin'ny mpivady
Inona no famaritana ny fitaovana iray amin'ny komposita?
Chase Press: Fitsaboana tsy miankina amin'ny fanjakana, mahatsiravina ary mitaky fiarovan-tena
Fomba lehibe hianarana teny anglisy amin'ny teny anglisy
Henry Ford: Tantara dia Bunk!
10 dingana glycolysis
Top 10 Lisitry ny karazana latina tsara indrindra tamin'ny taona 1950
Ny fomba fanaovana ny asa fivarotana ho an'ny asa atao any am-pianarana
Fihaonambe miaraka amin'ny Black-Eyed People
Ny fomba hanoratana sy hanorenana lahateny mandresy lahatra
Fantaro ny dikanteny anglisy "Text Sanctus"
Taonan'ny Horoscopes ho an'ny Sinoa Sinoa rehetra
Fitaovana fanenana lahateny amin'ny ordinateranao
Saint Bernadette sy ny Visions ao Lourdes
Lohahevitra momba ny safidinao: Torohevitra tsotra momba ny toro-hevitra ho an'ny safidy # 7
Adin'ny Roses: Battle of Stoke Field
Ny Fanjakana Ottoman | Fakàna sy Sarintany
Nahoana izy io no orana?
Isan'ny famindram-po amin'ny filoha